Baarlamaanka Soomaaliya oo meelmariyey heshiiska doorashadda
MUQDISHO, Soomaaliya - Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa Sabtida maanta ah wuxuu meelmariyey heshiiska doorashooyinka 2020-21; waxaa ogolaatay in la ansixiyo 252 Xildhibaan, laba kalnae waydiideen, halka 1 sharci-dejiye uu ka aamusay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa heshiiskan in la gaaro waxay ku qaadaatey waqti badan iyo dedaal dheer, oo qeyb ay ka ahayd Safaaradda Mareykanka oo cadaadis ku saartey madaxda Maamullada inay Muqdisho tagaan, oo shirka ka qeybgalaan.
Doorashooyinka soo socda ayaa ah kuwa aan wax badan ka duwanayn kuwii hore, iyadoo waxa lagu soo kordhiyay ay yihiin kaliya in ergadii ahayd 51 laga dhigay 101, sidoo kalena halkii degaan doorasho labo laga dhigay.
Wali Soomaaliya kama bixin nidaamka qabiilka 4.5, kaasoo mudo dheer lagu soo dooranayay madaxda, waxaana Madaxweyne Farmaajo uu balan-qaadey markii uu xafiiska yimid kadib inuu dalka ka qabanayo doorasho qof iyo cod ah, balse ku fashilmay.
Coddeynta soo aadan wuxuu qorshuhu ahaa in ay noqoto qof iyo cod, balse waxaa ka gaabisay Villa Soomaaliya oo ku guuldareysatay in ay dhaqan-geliso halbeegyadii aas-aasiga u ahaa kana mid tahay ammaanka iyo dhameystirka dastuurka.
Meelmarinta heshiiska ayaa la macno ah in fulintiisa ay bilaaban doonto bisha November, 2020, waxaana dowladda iyo maamulada ay soo magacaabayaan guddi isku daba ridi doona coddeynta Xildhibaanadda iyo madaxtinimadda.
Farmaajo ayaa ah murashax doonaya in uu difaacdo kursigiisa, hase ahaatee, waxaa calaamad su'aal ay dul-hooganeysaa suurtagalnimada in dib loo dooran doono maadaama uu ku fashilmay in uu fuliyo balan-qaayadiisa ololihii doorashadda ee 2017-kii.
Farmaajo oo saxiixay Sharci muhiim ah oo kasoo gudbay BF [Sawirro]
War Saxaafaded 31.12.2018. 14:59
Aqalka Sare ayaa dhawaan codka kalsoonida siiyay sharcigan oo kadib u gudbay Madaxweynaha.
Kheyre oo si lama filaan ah xilkii uga qaaday Wasiir kale [Sababta]
Soomaliya 26.07.2018. 10:22
Taliyihii booliska degmadda Afgooye oo qarax lagu dilay
Soomaliya 22.03.2020. 18:45
Xukuumada Soomaaliya oo si KMG ah u fasaxdey duulimaadyada
Soomaliya 21.03.2020. 12:10
Farmaajo oo ka hadlay heshiis laga gaarey Khilaafka Galmudug
War Saxaafaded 13.07.2018. 16:37
Al-Shabaab oo ka hadashay Maalgashiga Ethiopia ee Dekadaha Soomaaliya
Soomaliya 11.07.2018. 08:02
Qaraxyo xoog leh oo goordhaw ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 07.07.2018. 11:19
Maxay kawada hadleen Wasiir Cawad Iyo Safiirka Imaaraadka?
Soomaliya 03.07.2018. 13:54
Villa Soomaaliya oo si dabacsan uga falcelisay gefka Macron ee Islaamka 29.10.2020. 00:45
Maxkamadeyn lagu bilaabay shabakad tobanaan qof ku dishay Boosaaso 28.10.2020. 22:30
Fowziya Abiikar oo eedeyn culus u jeedisay Wasiiro iyo Xildhibaano 28.10.2020. 20:30
Shariif: Waxaan rabnaa in dalkan aan xoog lagu joojin ee sharci lagu joogo 28.10.2020. 17:33
Somaliland oo difaacdey go'aanka ay ku hakisay wadashaqeynta UN-ka 28.10.2020. 16:30
Farmaajo iyo Fahad oo saluugay xubno ay xusheen maamulada 28.10.2020. 10:10